Isbadalka Suuqyada Magaalooyinka DDSI. 7- 6 – 2018. – Ahmed A. Abdulahi
Isbadalka Suuqyada Magaalooyinka DDSI. 7- 6 – 2018.
AhmedAbdiAbdulahi	Uncategorized	 August 6, 2018 1 Minute
Kadib duulaankii ay ciidamada federal ka Ethiopia kusooqaadeen caasimada DDSI ee jigjiga maalintii sabtidii lasoodhaafay, waxaa gabi ahaanba suuqyada DDSI gaar ahaan magaalada jigjiga lagadareemayay isbadalka ganacsiga gaar Ahaan SIXIRKA waxlagukala iibsado.
Dadlada deegaanka soomaalida itoobiya waxay dhinaca bari afka kagahaysaa xuduuda Oromada taasoo marin mihiim ah uh Galintaanka miciishada yaryar ooy uguhorayso KHUDRADU taasoo lahelin ilaa iyo intii dhibaatadii milatari dhacday. Waxaa siwayn loowaayay iibsashada Kaarka Mobilka gacanta kaasoo qiimihiisa dhabta ihi isbadalay. Warar aankahelay qaarkamida dadka dagan oon xidhiidh lasamaynay ayaasheegaya in kaarka mobileka gacanta qiimihiisu ahaa 10 ETB hada 15 ETB lagu iibsanayo waa hadii aywaliba inlahelo aysuurto-galtahay maadaama ay iskusocodka SuuQu wali hakad kujiro.
Waxaajira warar lagasiidaayay telefiishinka HCTV ee xaruntiisu tahay Somaliland, kaasoo kutusinaya muuqaalo Dad Rayid ah oo uuqaxay magaalada xuduuda ee WAJAALE.
majiro saadaal dhab ah oo lagaboxinkaro waxa xigikara, lakiin dadka kutakhasuusay cilmiga dhaqaalaha ayaa walaac kaqaba isbadal dhaqaale oo saamaynkara dadka kunool DDSI gaar ahaan magaalada Jigjiga.
Waxaa idiinsootabiyay aniga oo Axmed Cabdi Cabdulaahi ah.
Fadlan araagtidaadu Waa mihiim.
Previous Post Ogaden oil discovery, an ‘opportunity or challenge’? by Ahmed Abdi Abdulahi
Next Post Isbadalka ganacsi ee Suuqyada DDSI. 7- 6- 2018.